Aquarium Phuket ~ Journey-Assist- Fintinana Phuket
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Aquarium Phuket
Na izany aza, ampahafantarinay anao fa ao Phuket dia misy TWO oceanarium-aquarium!
Eto amin'ity pejy ity isika dia mijery ny ranomasina, izay efa taona maro ary hita eo amoron'ny Cape Panwa ao atsimon'i Phuket. Nantsoina hoe "Aquarium Phuket"
Ary misy ny Aquarium Vaovao «Aquaria», izay nisokatra tamin'ny tapaky ny taona (2019) tany amin'ny toeram-pivarotana «Central Phuket Floresta". Azonao atao ny mianatra azy amin'ny an-tsipiriany HERE
Famintinana am-dranomasina Aquarium Phuket ao amin'ny Phuket. Vidin-javatra.
Phuket Aquarium Aquarium Phuket amin'ny sarintany. Ahoana no hahatongavana any.
Saripika sy horonan-tsarin'ny Oceanarium Aquarium Phuket
Ny hevitra momba ny Oceanarium Aquarium Phuket in Phuket (Google reviews)
Phuket Aquarium Review (Tripadvisor.com)
Aquarium ao Phuket (Phuket aquarium). Overview
Aquarium kely mahafinaritra. Eto ianao dia mahita karazana trondro sy biby an-jatony izay miaina any amin'ny ranomasina akaikin'ny Phuket. Ankoatr'izay, misy fampandrosona tena tsara natokana ho an'ny tsunami 2004, miaraka sary sy fampiratiana tsy fahita firy.
Azo heverina fa tsy hahatonga fahavitrihana ho an'ny mpandeha za-draharaha ity ranomasina ity. Ireo izay tsy mbola nitsidika fotaka Aquarium ho an'ny daholobe anefa dia nanoro hevitra mafy ny handeha eto. Misy tranga mahaliana. Guaranteed Azo antoka ny fahatsapana!
Ao koa ny fivarotana manana vokatra souvenir ny aquarium.
Ary misy faritany mahafinaritra sy promenade iray izay misy "milona" miaraka amin'ny sakafo an-dalambe Thailandey matsiro.
Misokatra isan'andro ny aquarium manomboka amin'ny 8:30 ka hatramin'ny 16:30
varotra tapakila - hatramin'ny 16.
Torohevitra ny hametraka ora iray sy sasany mandritra ny fitsidihana amin'ny fomba milamina.
Ny vidin'ny Aquarium
Ny tapakilan'ny olon-dehibe dia mandoa 180 baht
ankizy - 50 baht.
Ho an'ny ankizy latsaky ny 109 cm ny haavony ary ho an'ny olon-dehibe mihoatra ny fidirana amin'ny 60 taona maimaim-poana.
Rehefa faran'ny herinandro amin'ny 11 maraina, dia mihinana trondro, sokatra ary antsy eny imasom-bahoaka ny mpikirakira scuba.
Ny tsy fahampiana lehibe amin'ny andrim-panjakana dia ny aquarium dia any atsimon'ny Nosy, any amin'ny faran'ny Cape Panva. Malemy ny fotodrafitrasa eto, tsy misy fanintonana hafa manakaiky, satria matetika izy ireo no tonga hitsidika ny Oceanarium ihany. Tsy mandeha eto ny fitateram-bahoaka, ka afaka mitondra taxi na fiara taxi / fiara ihany ianao.
Amin'ny ankapobeny dia mendrika ny hoentina ity toerana ity. Indrindra mandeha miaraka amin'ny ankizy sy ireo mbola tsy nitsidika ireo toerana ireo taloha.
Aiza no misy azy. Address. Manondro ny sarintany. Antsipiriany momba ny fifandraisana
Hita any atsimon'ny Nosy, any amin'ny faran'ny Cape Panwa.
Address: 8 ที่ 51 83000 ถนน ศักดิ เดช Wichit, Distrika Mueang Phuket, Phuket XNUMX, Thailand
telefaonina: + 66 76 391 126
Tranonkala - https://phuketaquarium.org/en/
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://g.page/phuketaq?share
Phuket Aquarium eo amin'ny sarintany
Hevitra momba an'i Phuket Aquarium (Google review)
Mahaliana foana ilay izy. Manenina aho fa tsy tao amin'io toerana io aho no tao Phuket.
Aquarium vaovao no niseho tao Phuket ao amin'ny foibe ivarotana Florest. Tena somary avo dia avo ny vidiny, fa ny aquariums mahasalama tokoa sy ny haingon-trano ao anatiny dia tsy mahazatra, toy ny onja-dranomasina mirehitra, na sarivongana taloha. Ary ny biby dia tsy mahazatra. Tsy trondro miloko fotsiny. fa misy koa ny vorondolo, bibikely, stingrays, jellyfish sy ny maro hafa.